Tue, Mar 19, 2019 | 07:24:32 NST
२०३२ सालमा मकवानपुरको ठिङगनामा जन्मेका केदारले जीवनमा सफलता पाउन थुप्रै हण्डर र ठक्करहरु खाएका छन् । बुवा कृष्णप्रसाद घिमिरे र अग्नीकुमारी घिमिरेका छोरा उनी अहिले सबैभन्दा महंगा हाँस्य कलाकार बनेका छन् । अहिले उनले एउटा सिनेमामा काम गरेको १० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएकाछन् ।
यो हाँस्य कलाकारहरुले लिएको अहिलेसम्मकै ठूलो रकम हो । यतिमात्रै हैन उनलाई एउटै सिनेमाबाट २५ लाख पारिश्रमिकको समेत प्रस्ताव आएको छ । तर उनले सिनेमाको कथामा बढी ध्यान दिएका कारण जस्तो पायो त्यस्तो सिनेमा खेल्ने निर्णय लिइहालेका भने छैनन् । बुधबार हामीले उनको जन्मदिन पारेर यस सामग्रीमा उनको कलाकारिताको संघर्षका दिन र सफलताहरुलाई प्रस्तुत गरेका छौं ।
यसरी तय भयो काठमाडौंको यात्रा
कानुन विषय अध्ययन गर्न उनले २०५० सालमा काठमाण्डौंको यात्रा तय गरेका थिए । कानुन पढेर ठूलो मान्छे बन्ने अनि देशको सेवा गर्ने सपना बोकेर काठमाण्डौं छिरेका उनले त्यो सपना पूरा गर्न भने सकेनन् । उनलाई देख्दै नदेखेको सपना र कामले सफलता दियो ।
सबैको प्रिय सेलिब्रेटीको रुपमा स्थापित गराइदियो । खासमा उनलाई एउटा अन्तर्वार्ताले कानुन विषयमा रुचि जगाएको थियो । बोर्ड टपर गरिमा रानाको अन्तर्वार्ता हेरेपछि त्यो अन्तर्वार्ताले नै कानुन विषय पढ्ने भूत जगाएको थियो । गरिमाले आफू कानुन विषय पढेर देशको लागि केही गर्ने कुरा गरेको सुनेर माग्नेलाई पनि त्यहि काम गर्ने रुचि जागेको थियो । त्यो उमेर उनको लागि मात्रै हैन सबैको लागि जे देख्यो त्यहि बन्न मन लाग्ने समय र उमेर हो ।
कानुन विषय पढ्ने भुतले उनलाई काठमाण्डौंसम्म ल्यायो । काठमाण्डौं आएर उनले कानुन विषय अध्ययन गर्न पनि थाले । तर उनले यसलाई पास गर्न सकेनन् । त्यो समय उनीसँग स्रोत र साधानको पनि कमी थियो ।
त्यो बेला काठमाण्डौंमा भएका उनका दाई भाउजु पनि आर्थिक रुपमा त्यति सम्पन्न थिएनन् । यहि कारण केदारले फेरि मकवानपुरको यात्रा तय गरे । घर पुगेर बुवासँग आफूलाई जसरी पनि कानुन विषय पढ्न मन भएको कुरा उनले व्यक्त गरे ।
आर्थिक समस्या भएका कारण ब्याक सपोर्टको खोजीमा भएका उनले काठमणडौंमा अडिनको लागि जुक्ति निकाले । उनी थोरै रकममा गर्न सकिने व्यापारको खोजीमा लागे । घरबाट १५ सय रुपैयाँ लिएर आएका उनले १ हजारसम्ममा गर्न सकिने काम खोज्दै जाँदा बाटोमा माल्प्वा पकाउने र साग बेच्ने काम भेटे ।
व्यापार थाल्नु भन्दा पहिले नै घरबाट ल्याएको पैसा खर्च भएर उनीसँग जम्मा ८ सय ५० रुपैयाँ मात्रै बाँकी थियो । त्यसकारण उनले ८ सय रुपैयाँमा कस्मेटिक पसल खोले ।
कस्मेटिक पसलमा सुरुको दिनमा उनले २ सय ५० रुपैयाँको कमाई गरे जुन कमाईले उनलाई निकै खुशी दियो । यस हिसाबले महिनामा ७हजार ५ सय रुपैयाँ कमाई हुने र एसएलसी पास भएको युवाले यति कमाउनु राम्रो भएको भन्दै उनी खुशी भए ।
यस्तै उनले सुरुवाती दिनमा काठमाण्डौंमा जीरा धनियाँ बेच्ने काम पनि गरे । पछि केदारले लगनखेलको बाटोमा होलसेल पसल खोले । तर त्यहिबेला नेपाल सरकारले बाटोमा भएका होलसेल पसल हटाउने आदेश दियो ।
योथाहा पाएर केदारले पनि सरकारलार्इ हस्त नमस्कार ! भनेर हिँडे । तर उनले यत्तिकै हार भने खाएनन् । उनले त्यसपछि तीनवटा टेम्पु किने । तर उनको दुर्भाग्य त्यस बखत नेपाल सरकारले ट्याम्पु पनि हटाउने निर्णय लियो । त्यस बखत उनले एकलाख भन्दामाथि परेको ट्याम्पुलाई ३० हजारमा बेच्नु परेको थियो ।
केदारको संघर्ष यत्तिमै सकिएको थिएन । उनले यस पटक भने सटरमा होलसेल पसल खोले । तर पछि त्यो सटर पनि बाटो बढाउने भनेर भत्काइयो । केदारलाई हरेक ठाउँमा नेपाल सरकारले लात्ता हानेको थियो । यहि कारण उनी सरकारले लात्ति हानेर आफूलाई कलाकार बनाएको भन्छन् ।
सरकारको लात्तिले पीडित भएका उनको त्यहि समयमा आरजे सुमित्रा खड्कासँग भेट भयो । केदारले उनलाई आफ्ना कविताहरु रेडियोमा पढ्न लगाउँथे । त्यस बखत केदारले लेखेका कविता भनेर रेडियोमा आउँदा उनलाई निकै खुशी लाग्थ्यो । उनी रेडियोमा आएको कविता वरिपरिका सबै पसलेहरुलाई जम्मा पारेर सुनाउँथे ।यहि क्रममा पछि उनले पनि रेडियोमा बोल्ने मौका पाए।
सुरुमा उनले रेडियोमा दुईवटा कार्यक्रम चलाउँथे । एउटा भाषाभाषिको कार्यक्रम थियो भने अर्को हाँस्य कार्यक्रम । हाँस्य कार्यक्रममा उनले हाँस्य कलाकारहरुसँग अन्र्तवार्ता लिन जानुपर्थ्यो र यहि क्रममा उनले नेपालका प्रायः हाँस्य कलाकाहरुसँग अन्तर्वार्ता लिने मौका पाए ।
एकपटक उनी मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य कहाँ पनि पुगेका थिए । कलाकारहरुसँग अन्तर्वार्ता लिँदालिँदै उनलाई पनि हाँस्य कलाकार बन्छु भन्ने लाग्यो । अन्तर्वार्ता कै शिलशिलामा उनले एकदिन मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई हाँस्य कलाकार कसरी बन्ने ? भनेर सोधे। उनीहरुले अभिनय सिक्नुपर्ने सुझाव दिएपछि उनी अभिनय सिक्न गए । उनले रेडियोमा काम गर्ने क्रममा सन्तोष पन्तको पनि अन्तर्वार्ता लिएका थिए । सन्तोष पन्तसँग अन्तर्वार्ता लिएपछि सन्तोषलाई भनेको कुरा सम्झँदै उनी भन्छन्, ‘मैलै उहाँलाई त्यतिबेला भनेको थिएँ, अन्तर्वार्ता त एक बाहाना हो । म एउटा कलाकार बन्न चाहन्छु । मैलै सोचराखिसकेँ मैले अभिनय पनि सिकिराको छु ।’
अनि उहाँले ल नम्बर दिएर जाउ भन्नुभयो । त्यसबखत मेरो मोबाइल थिएन । मैलै घरबेटीको नम्बर दिएर आएँ । तर फोन आएन । फोन आयो भनेर घरबेटी कहाँ सोध्न जाँदा उसैले निकाल्देला भन्ने पीर भइसक्यो तर फोन आएन । पछि एकदिन प्रज्ञा भवनमा सन्तोष दाइसँग मेरो भेट भयो । त्यस भेटमा उहाँले मलाई सोमबार बोलाउनुभयो । सोमबार गएँ । तर त्यो सोमबार मलाई त कुनै ठूलो दुर्घटना भए जस्तै लाग्यो । झण्डै ६० देखि ७० जनाको लाइन थियो सन्तोष पन्तको घर अगाडि । ती सबै ‘हिजो आजका कुरा’ मा खेल्न पाइने आशले गएका रहेछन् । त्यो दिन म सफल भइन । धेरै पटक धाएपछि बल्लतल्ल ‘हिजो आजका कुरा’मा छानिएँ। तर जम्मा एउटा सम्वाद बोल्ने अवसर मिल्यो । यसरी सुरु भयो मेरो कलाकारिता ।’
यसरी बन्यो माग्ने बुढाको परिचय
‘हिजो आजका कुरा’बाट सुरु भएको कलाकारितालाई उनले निरन्तर अगाडि बढाए । मेहनत गरे । उनले नेपाल टेलिभिजन कोसिरियल ‘गीताञ्जली’मा काम गरे । यसमा उनीसँगै कलाकार जितु नेपाल पनि काम गर्थे ।
जितु र केदारले ‘गीताञ्जली’ लेख्ने र खेल्ने दुवै अवसर पाएका थिए । ‘गीताञ्जली’ले उनलाई कलाकारको रुपमा स्थापित गराउँदै थियो । यहि क्रममा उनले ‘जिरे खुर्सानी’मा पनि काम गर्ने अवसर आफै जुराए । ‘जिरे खुर्सानी’मा काम गरेर केदारलाई चित्त बुझेन । किनकी दुई तीन हप्तामा बल्ल सिरियलमा देखिने पालो आउँथ्यो। माग्नेलाई मुख्य भूमिकामै देखिन मन लाग्यो । त्यसपछि उनले सीताराम कट्टेलसँग सहकार्य गरेर‘‘मेरी बास्सै’ बनाए। ‘मेरी बास्सै’मा माग्नेको भूमिकामा देखिएपछि केदारले चाहेको स्टारडम पाए ।
‘मेरी बास्सै’मा जोडी बाँधिएपछि केदार र सीतारामको जोडीलाई केसी जोडी भनिन्थ्यो ।
यो जोडीले हाँस्यव्यङग्यमा एकताका एकछत्र राज गरेको थियो भन्दा फरक पर्दैन । तर बिडम्बना यो जोडी लामो समय अघि बढेन । केदार र सीतारामबीच फाटो आयो । यहि कारण केदारले आफैले जन्माएको ‘मेरी बास्सै’लाई अलबिदा भन्ने अवस्था सिर्जना भयो । सीतारामसँग जोडी फाट्नुमा केदार आफूहरु दुवैलाई जिम्मेवार मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘अरुलाई दोष दिने ठाउँ छैन । हामी आफैले आफ्नो जोडीको रक्षा गर्न नसकेको हो ।’
केदारले छोडेको केही वर्ष भने सीतारामले ‘मेरी बास्सै’ लेखन र निर्देशनको काम सम्हाले तर पछि सामाजिक सेवामा सक्रिय भएका कारण उनले पनि अहिले ‘मेरी बास्सै’लाई समय दिन सकेका छैनन् । उता केदारले भने त्यसपछि ‘खासखुस’ गरे । तर अहिले ‘खासखुस’ पनि बन्द भइसकेको छ ।
अहिले केदार पूर्ण रुपमा सिनेमामा सक्रिय छन् । सिनेमा ‘छक्का पञ्जा २’ मा राम्रो काम गरेको भन्दै उनलाई अन्य सिनेमाहरुको लाइन लागेको छ । तर उनले पनि राम्रो सिनेमामा मात्रै काम गर्ने भन्दै सेलेक्टेड सिनेमाहरुलाई महत्व दिएका छन् । ‘छक्का पञ्जा २’ पछि उनलाई दर्शकले सिनेमा ‘रामकहानी’मा देख्न पाउनेछन् ।